Gudoomiyaha Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadda Kolayga Mudane Cadaani oo u doortay Axmed Muuse Lataliyaha XSKK - Kubadda Somali Sport Portal
M Sheikh / Friday, July 5, 2013
Gudoomiyaha ayaa sheegay in ay lagama maarmaan tahay si loo gaaro horumar iyo talaabo hor leh in la helaa aqoon yahano leh xirfadda, aqoonta iyo maamulka kubadda kolayga
Dhawaan ayay ahayd markuu gudoomiye Cadaani,u bayaaniyay gudoomiye ku xigeenada cusub ee XSKK iyo xubnahooda xilalka iyo shaqooyinka ay kala leeyihiin. Talaabadan ayaa ah tii xigtay oo uu gudoomiyuhu hadana maamulka ka soo qayb geliyo mid ka mid ah cayaaryahanadii hore ee u soo halgamay Qaranka soomaaliyeed qayb wayna ka soo qaatay dadaalka horumarka kubadda kolayga.
Axmed Muuse Xuseyn ayaa ahaa laacibiintii magaca wayn ku lahayd cayaarta kubadda kolayga oo u cayaari jiray naadigii kooxda kubadda kolayga Batroolka iyo Qarankii Soomaaliyeed. Axmed markuu ka fariistay cayaaraha wuxuu macalin u noqday kooxo kala duwan laga soo bilaabo Gobol, naadi iyo Qaranba.
Sanadii 1982-dii wuxuu macalin u noqday kooxdii naadiga wiilasha Batroolka
Sanadii 1985-tii wuxuu macalin u noqday kooxdii naadiga gabdhaha Sancada
Isla sanadii 1985-tii wuxuu macalin u noqday kooxdii wiilasha Gobolka Sanaag.
Nasiib xumo dhamaadka sanadii 1985 ayuu ka dhoofay dalka una safray dalka Jarmalka oo ilaa iyo hada ay reerkiisu deggan yihiin. Axmed wuxuu ka mid ahaa asxaabtii qaybta wayn ka qaadatay tartankii wiilasha kubadda kolayga Zone-ka 5aad ee dhawaanta lagu qabtay dalka Tanzania asagoo ka ahaa maamulaha kooxda (Team Manager) kooxda watay.
Hadaan nahay maamulka kubadda.com waxaan u hambalyeeynaynaa Axmed Muuse jagada cusub ee loo magacaabay, waxaana Illaah uga baryaynaa in uu la garab galo. Sideedana qof kaligiis wax ma qaban karo balse waxaan rajaynaynaa dhamaan Bahwaynta kubadda Kolayga oo isku duuban in ay garab ku siin doonaan xilkaas weyn ee dusha laga saaray.
Si aad u akhrisato warqada magacaabida RIIX HALKAN
Previous Article Kulan ay iskugu yimaadeen dhamaan xubnaha ku jira Xiriirada Isboortiga Soomaaliyeed oo ka dhacay London
Next Article Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun (3)
4650 Rate this article: